Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Hijanona ao anatin'ny fe-potoana i Jamaika
Nanambara ny praiminisitra fa hijanona ao anatin'ny fe-potoana fohy i Jamaika
Ny praiminisitra ao Jamaika, ny tena Hon. Andrew Holness, dia nanambara ny talata 4 may 2021, fanitarana efa-bolana ny ora tsy hihinan'ny firenena hatramin'ny 2 Jona.
Ny ora tsy fiasana isan-kerinandro amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma dia mbola hitohy ao amin'ny nosy.
Ny ora famandrihana efatra amin'ny faran'ny herinandro manaraka dia hiova manomboka amin'ny 6:00 hariva ny asabotsy ary amin'ny 2:00 hariva ny alahady mifarana amin'ny 5:00 maraina ny ampitso.
Hisy ny tsy fahazoana mivezivezy mandritra ny andro amin'ny Alakamisy 24 Mey.
Nilaza ny praiminisitra fa ny ora fiandrasana mandritra ny herinandro, ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, dia hijanona amin'ny 8:00 alina ka hatramin'ny 5:00 maraina, fa havaozina mandritra ny faran'ny herinandro manaraka.
"Ny curfews izao dia hanomboka amin'ny 6:00 hariva ny asabotsy ary amin'ny 2:00 hariva ny alahady, hifarana amin'ny 5:00 maraina ny ampitso," hoy izy tamin'ny House of Representatives tao amin'ny Gordon House.
Ho an'ny Andron'ny Asa, izay hojerena amin'ny Alatsinainy 24 Mey, dia nilaza ny praiminisitra Holness fa hisy ny ora tsy hitsaharana mandritra ny andro.
"Noho izany, ny alahady 23 may, ny ora tsy ampoizina dia hanomboka amin'ny 2 ora tolakandro ary hanohy hatramin'ny alatsinainy ary hifarana amin'ny 00:5 maraina ny talata 00 mey", hoy izy nanamarika.